3D Wapụtara Nkume-Wall & Art - Morningstar Stone Co., Ltd.
White Sivec otickpụrụ ụdị ụdị 3D a pịrị apị
Nzọụkwụ a bụ isi ma dịkwa oke mkpa maka usoro niile a. Nkume cubic blocks na slabs na-ekesa ihe akụrụngwa dị njikere maka nhazi. Nhọrọ nke ihe ndị ahụ ga-achọ ịmara ihe nhazi nke ihe odide na ngwa na uche dị njikere maka ịmụ ihe ọhụrụ ọ bụla. Nnyocha zuru ezu nke akụrụngwa gụnyere: nyocha ndekọ na nyocha ihu anụ ahụ. Naanị usoro nhọrọ ahọpụtara n'ụzọ ziri ezi, ngwaahịa ikpeazụ nwere ike ikpughe ọmarịcha mma na ngwa ya. Anyị ị nweta otu, na-eso ụlọ ọrụ omenala nke na-amị naanị àgwà ngwaahịa, bụ nnọọ adept na-achọta na ịzụta elu àgwà ihe onwunwe. ▼
CNC atụgharị ▼
Mechanization na ụlọ ọrụ okwute emebeghị ogologo oge. Ma o meela ka ụlọ ọrụ ahụ dịkwuo ukwuu. Karịsịa igwe CNC, ha na-enye ohere maka imepụta ihe okike na imepụta ihe maka okike okike. Site na igwe CNC, usoro ịkpụzi okwute bụ ihe ziri ezi ma rụọ ọrụ nke ọma
4) ma ọ bụrụ na e nwere mpempe akwụkwọ ọ bụla nwere nkwarụ: oghere, nnukwu ntụpọ ojii, na-acha edo edo nke kwesịrị ịgbanwe. Mgbe enyochachara ogwe niile na akara. Anyị ga-amalite mbukota usoro
Anyị pụrụ iche mbukota nkewa. Site na ngwaahịa osisi na osisi plywood na ụlọ ọrụ anyị, anyị nwere ike ịhazi mbukota maka ụdị ngwaahịa ọ bụla, ma ọ bụ ọkọlọtọ ma ọ bụ na-adịghị mma. Ndị ọrụ ọkachamara na-akwakọ ngwaahịa maka ngwaahịa ọ bụla site na ịtụle: oke ibu dị na ngwugwu ọ bụla; na-mgbochi skid, mgbochi nkukota & shockproof, waterproof. A mma na ọkachamara mbukota bụ nkwa nke nchebe handover nke okokụre ngwaahịa ahịa